Miinooyin ay Al shabaab ku aaseen duleedka Muqdisho oo la soo saaray – Somali Top News
Miinooyin ay Al shabaab ku aaseen duleedka Muqdisho oo la soo saaray
October 6, 2019 Somali Top News	0 Comments
Ciidamo ka tirsan kuwa Booliska Soomaaliya gaar ahaan kuwa sida gaarka u tababaran ee Haramcad ayaa Maanta Miinooyin nooca dhulka lagu aaso ah ka soo saaray inta u dhaxeeysa Ceelasha Biyaha iyo deegaanka Siinka Dheer ee duleedka Magalada Muqdisho.
Saraakiisha hogaamineysa howlgalka Miinada lagu soo saarayay ayaa waxaa ay sheegeen in halkaas Miinada ay geliyeen wadada xubno ka tirsan Al-shabaab,isagoo tilmaamay in lagu doonayay in lagu waxyeeleeyo gaadiidka dadweynaha.
Warar qaar ayaa sheegaya in Ciidankan howlgal ka sameeyay Duleedka Muqdisho ay ahaayeen kuwa dhawaan tababar loogu soo xiray dalka Turkiga.
Inta badan wadada isku xirta Magaalada Muqdisho iyo Degmada Afgooye ee Shabeellaha Hoose ayaa waxaa mararka qaarkood ka dhaca qaraxyo Miino ah,kuwaasi oo lala eegto Ciidanka dowladda iyo kuwa AMISOM xiliyada halkaas socdaalka ku marayaan,waxaana Mas’uuliyadooda sheegta Al-shabaab.
← Allies, donors map the road to Somalia’s coming election
Mooshin xilka looga qaadayo Dhoob Daareed oo ka socda Garoowe →
Ilhan Cumar” Barack Obama wuxuu ahaa dilaa dhoola cadeeya”
March 9, 2019 March 9, 2019 Somali Top News 0
C.Shakuur oo ka hadlay wax ka badalkii lagu sameeyay xeerka Bankiga Dhexe
Burcad Badeed Soomaali ah oo weerartay Markab xamuul siday